I-Joel's Off Grid Cottage eKlein Karoo
South Cape DC, Western Cape, eMzantsi Afrika
Ifama sinombuki zindwendwe onguJoel
Ukuhlala kwifama yegrid permaculture eKlein Karoo ethe qelele kwiintaba zaseGroot Swartberg. Amanzi ethu ngumxhuzulane afumana kumthombo osezintabeni kwaye ayaphila kwaye akanazo iikhemikhali eziyingozi nezingcolisi. Sine-15 Km yeendlela zokuhamba intaba kunye nezona ngxangxasi zintle zintle. I-cottage ixhotyiswe ngokupheleleyo ngamagumbi amabini okulala, igumbi lokulala eliphambili elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokulala lesibini elineebhedi ezimbini ezingatshatanga okanye eliphindwe kabini njengebhedi enye. Indawo yokuhlambela yangaphandle yinto yokwenyani yokusetyenziswa.
Sinedama lokuqubha lamanzi endalo elingenamichiza eyingozi. Kukho idonki engaphakathi endlwini egcina umva njengendawo yokubasa ukuze igcine umntu efudumele kubusuku obubandayo basebusika. Sineehektare ezingaphezulu nje kwe-1000 zomhlaba ocwengileyo kwaye siqhayisa ngeentlobo zeendawo zokuhlala ezingekho ngaphantsi kweshumi zeKlein Karoo kwifama ukusuka kwifynbos ukuya kumatyholo eKaroo kunye neentlobo zezityalo ezinezimuncumuncu. Isitulo esijingayo sokucamngca kwi-koppie yeyona ndawo ifanelekileyo yokukhupha uxinzelelo. Zonke iindwendwe kuya kufuneka zisayine ifomu yembuyekezo xa zifika. Ixesha lokungena liqala ngo-12 emini ukuya ku-5pm. Ixesha lokuphuma ngu 10am. Ubuncinci bemfuno yesithuthi kwindlwana yokuqhuba ngamavili angasemva anemvume yomhlaba ophakamileyo, kungenjalo, isithuthi esisiwa kwindlwana ebonelelwa njengenkonzo ngumninikhaya eneendawo zokupaka ezikhuselekileyo kwizakhiwo zefama zezithuthi zeendwendwe ngexesha lokuhlala kwazo. Izilwanyana zasekhaya eziphakathi ukuya kwezincinci zivumelekile
Yiza kwaye ube namava kule ndawo ihambelana nokusingqongileyo apho sizama ukugcina unyawo lwethu lwekhabhoni lusezantsi kangangoko. Umgangatho wamanzi omthombo wamanzi asezintabeni kunye nomoya ongenalungcoliseko longezwa iibhonasi kolu rekelo kwiiNtaba zaseGroot Swartberg apho sizama ukuphila ngokuhambelana nendalo.
Kuninzi okwenziwa eDe Rust nakwiindawo eziyingqongileyo. ICango Caves edumileyo ikufuphi njengeMeiringspoort, eyona ndlela intle yokudlula edibanisa iKaroo encinci ukuya kwiGreat Karoo. Ukukhwela ihashe kuyafumaneka kwifama ekufutshane njengoko inkwenkwezi ijonge kwiteleskopu yolwazi olululo uJames Van Vuuren. Kuphinde kubekho iSwartberg Pass entle edibanisa iOudtshoorn nePrince Albert, ilali encinci eseGroot Karoo. Okanye nyukela kwingxangxasi ecocekileyo kwipropathi. Okanye vele uzipholele kule paradesi intle kwaye uzive ukhulula uxinzelelo lwemihla ngemihla.
Iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise zonke izibonelelo ezibandakanya ukhenketho lwehlathi lokutya lepermaculture.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- South Cape DC